Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMalta Breaking » IMalta ivulelekile ukuba igonywe abantu baseMelika
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeMalta Breaking • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Umbono ovela phezulu kwizixeko ezithathu, iVittoriosa, iSenglea kunye neCospicua
UMichelle Buttigieg, uMmeli waseMntla Melika kwiGunya lezoKhenketho laseMalta, oya kwiVeki yeVirtuoso yokuHamba ngokwakhe, weza neendaba ezimnandi kubacebisi beVirtuoso Travel awadibana nabo. IMalta, ichwebakazi elikwiMeditera, kutshanje ibhengeze ukuba kuvulelekile ukuba kugonywe abantu baseMelika abanokuqinisekisa ulwazi lwabo lwezempilo kusetyenziswa i-app yedijithali ebizwa ngokuba yiVerifly. UNks Buttigieg uqaphele ukuba "iMalta, ngoku, inezinto ezingaphezulu zokubonelela umhambi obutofotofo ngendawo yokuhlala eneenkwenkwezi ezintlanu, ubume bobugcisa obutsha / ii-spas, iindawo zokutyela zaseMichelin Star kunye namava aphilileyo."
IMalta ihambisa iresiphi yokugqibela yobunewunewu, enoluhlu lweendawo zokuhlala zexabiso ukusuka kwiipropathi zeenkwenkwezi ezintlanu, iihotele ezithengisa iivenkile, ukuya kwiipalazos zembali kunye neendawo zokugcina iifama.
Abakhenkethi banokonwabela namava aphucukileyo asuka emva kweeyure zokundwendwela indawo ezinembali ukuya ekuqeshweni kwezikhephe.
IMalta ifikeleleka ngokulula kwiindlela eziphambili zaseYurophu.
UMichelle Buttigieg ukwaphawule ukuba kukho umdla omkhulu kunye nemincili phakathi kwabaCebisi beVirtuoso ukuze bakwazi ukubonelela abathengi babo ngamava obutofotofo kwindawo ethetha isiNgesi, engaphantsi kwabantu kunezinto ezininzi ezithandwayo zaseYurophu, kunye nokwahluka okunje kukho into wonke umntu. "I-Malta ihambisa iresiphi yokugqibela yezobunewunewu, enoluhlu lweendawo zokuhlala zexabiso ukusuka kwiipropati ezinenkwenkwezi ezintlanu, iihotele ezithengisa iivenkile, ukuya kwiipalazos zembali kunye neefama," utshilo uNksk. Buttigieg. “Abakhenkethi banokonwabela amava akhethiweyo ukusuka kutyelelo lwasemva kwexesha lomsebenzi kwiindawo ezinembali ukuya ekuqeshweni kwezikhephe. Onke la mava obutofotofo anokufunyanwa eMalta ngexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa neendleko zendawo yokuhlala efanayo kunye nokhenketho olukhethekileyo kwilizwekazi laseYurophu. ” IMalta ifikeleleka ngokulula kwiindlela eziphambili zaseYurophu.
IVeki yokuHamba yeVirtuoso eLas Vegas sesona siganeko sonyaka soluntu lokuhamba ehlabathini wonke kuwo onke amalungu eVirtuoso, abaCebisi, kunye namaQabane aKhethwayo. Ngokukodwa kwinethiwekhi yeVirtuoso, inikezela ukuqeshwa kothungelwano lobuqu, amathuba ophuhliso olubanzi lobuchwephesha, iGlobetrotting yoLuntu, kunye nokubhiyozela iVirtuoso, uthungelwano oluphezulu lwehlabathi lokuhamba ngokunethezeka.
The iziqithi ezinelanga zaseMalta, embindini woLwandle lweMeditera, likhaya kuxinaniso oluphawuleka kakhulu lwelifa lemveli elakhiweyo, kubandakanya ubuninzi obuphezulu beeNdawo zeLifa leMveli le-UNESCO kulo naliphi na ilizwe. Valletta, eyakhiwe Knights abanekratshi of St. John, yenye yeendawo UNESCO kunye European Capital of Culture for 2018. Malta patrimony kuluhlu lwamatye ukusuka endala izakhiwo ilitye emi-free ehlabathini, ukuya kwenye uBukhosi baseBritani Ezona nkqubo zinamandla zokuzikhusela, kwaye kubandakanya umxube otyebileyo wolwakhiwo lwasekhaya, lenkolo kunye nolwezomkhosi ukusuka kumaxesha amandulo, aphakathi kunye nasekuqaleni. Ngemozulu entle enelanga, iilwandle ezinomtsalane, ubomi obuchumayo kunye neminyaka engama-7,000 yembali ebangel 'umdla, kuninzi ekufuneka ukubonile kwaye ukwenzile. www.wendwendani.com